induction yakashongedza ndarira uye emhangura matanda neakakwirira frequency brazing heater
Induction Brazing mhangura uye ndarira matanda uye mitsetse kutsiva torch kushanda. Kuita kwema torch ikozvino kunoguma nekunyanyisa kwakasvibiswa pagungano, uye kunoda kudzoreredzwa zvakare mushure mekuita basa rekutarisa.
DW-UHF-40KW yakakwirira frequency induction brazing muchina
Vaviri vanotendeuka open end conveyor coil
• Copper coupon ndiro uye tsvimbo yemhangura
• Braze alloy - 45% sirivheri, 1/32 DIA
Simba: 30 kW
Kupisa: Zvinenge 1350 ° F (732 ° C)
Nguva: Avhareji nguva - 25 masekondi
Kuti Induction braze mhangura coupon ndiro uye tsvimbo yemhangura ,, EZ Flo 45 braze waya yakatemwa kuita 2 ”marefu uye yakaiswa munzvimbo inoonekwa. Mune mamiriro ekugadzira, EZ Flo 45 yekutarisa paste inokurudzirwa. Iwo magungano akaiswa (ona mafoto) uye nekupiswa kweavhareji yenguva makumi maviri neshanu kuyerera iwo alloy uye kuzadzisa iyo inopisa.
Nekuda kweiyo simbi inopesana kusiyanisa pakati pemhangura nendarira, iyo bharari bar kupisa zvakanyanya Iyo coil yakagadzirirwa kupfekedza mbariro kune iyo chikamu chechikamu inopisa matanda uye kupisa kunoendeswa kune iyo ndiro zvakanyanya neyakaiswa pane kupinza inda kunoita kuti mabara atange asvikira tembiricha isati yasvika mundiro. Kana zvigadzirwa zvanga zvakafanana (shandira pamwe kuti ndarira kana ndarira kune ndarira, ichi hachisi dambudziko .. Kana bara iri ndarira uye ndiro iri ndarira hapana nyaya) - bedzi kana bara iri ndarira uye ndiro iri ndarira. Izvi zvinoda simba rekudzikiswa kubvumira tie yekushisa kupisa kubva patsvimbo yendarira kune ndiro yemhangura.
Mimwe migumisiro yakagadzikana uye yakakodzera kwekukura kwemazwi makuru, pasina chidimbu chekushongedza zvigadzirwa
Categories Technologies Tags brazing, ndarira, brazing mhangura, kupenya ndarira nendarira, High frequency Brazing copper, kuburitsa kusungurudza, kuburitswa kuburitsa mhangura, induction ichena mitsara yemhangura Post navigation